Micheal Keating oo ka degay Hargeysa & amar buuxa oo ku aadan dagaalka Sool oo Muuse Biixi la siiyay. – Xeernews24
Micheal Keating oo ka degay Hargeysa & amar buuxa oo ku aadan dagaalka Sool oo Muuse Biixi la siiyay.
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midowbay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Micheal Keating ayaa gaadhay magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland, isagoo halkaas kula kulmay Madaxda Somaliland oo ay ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyey ee kasoo kordhay deegaanada barriga gobalada maamulkaas, si gaar ahna duulaankii ay ku qaadeen Xaduuda ay la wadagaan maamul goboleedka soomaaliyeed ee Puntland.
Inkastoo aan shirka Jaraa’id ee ay wada qabtee maamulka Somaliland iyo Ergayga aan lagu soo qaadin qadiyadan, haddana wararka hoose ayaa sheegaya in ay Somaliland sheegtay in ay joogaan ciidamadeedu Xaduuda Soomaliland, ayna wali u dhiman yihiin deegaano kale.
Ergayga gaarka ah ayaa ka codsaday Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi in gabi ahaanba la joojiyo dhaqdhaqaaqyada ciidan, lagana hortago ficilada keenaya dagaalo cusub oo aan loo bahnayn.
Somaliland ayaa weerar kuqaaday deegaanka Tukaraq ee Puntland, waxayna kala wareegeen ciidamo halkaas joogay, taas oo kordhisay xiisada labada maamul u dhaxaysa.
Madaxda labada maamul ayaa hadalo kul kulul isku dhaafsaday warbaahinta,kuwaasi oo dadka siyaasadda falanqeeya ku tilmaameen kuwo sii hurin kara colaada labada maamul.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/01/5-5.jpg 525 841 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-01-10 15:58:282018-01-10 15:58:28Micheal Keating oo ka degay Hargeysa & amar buuxa oo ku aadan dagaalka Sool oo Muuse Biixi la siiyay.
Afwerka Eritreea iyo Abdel-Fattah al-Sisi masar oo ku kulmay caasimada Qa... Daawo Jabuuti oo laga furey xarun lagu kaydin karo Xogaha(Data Colection)